Lapho Izitolo ezinkulu ziba ngabasebenzi ... | Martech Zone
Lapho Izitolo ezinkulu ziba ngabasebenzi ...
NgeSonto, ngoJuni 29, i-2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Izolo bekuwusuku olukhulu e Indebe kabhontshisi. UPatric ume lapho Noobie, UDoug Theis ovela ku- Abahlinzeki beLifeline futhi kamuva ngosuku, u-Adam kusukela Umbhalo Ngesicelo.
AbakwaLifeline Datacenters banendaba epholile ngempela, futhi exakile endaweni yabo entsha e-Eastgate Mall. I-Indianapolis Business Journal yenze indaba ngabo lapho beqeda ukuthenga, kodwa manje isikhungo manje sesiyaphila. Ungumgcini wedatha ogcwele ngokugcwele ngayo yonke insimbi nempempe, futhi ngikholelwa ukuthi yi-Tier IV kuphela e-Indianapolis - futhi enkulu kunazo zonke eMidwest.
Izithombe ezivela KungOne.com.
I-Eastgate Mall yakhiwa ngeminyaka yama-50 futhi yathuthuka ngeminyaka yama-70. Bekuyi ushonile ngokusemthethweni ngemuva kweminyaka engama-50 yenkonzo. Eyakhelwe ekuphakameni kokwakhiwa kweNuke ne-USSR, ezinye zezitolo zinama-bunkers angaphansi komhlaba abakhiwa ngamakhredithi wentela kahulumeni ngaleso sikhathi. Ngakho-ke - lapha unesikhungo esinamathani ezinkulungwane zesikwele, ukufinyelela kuthrafikhi, amandla amaningi okuphakelwa, i-generator, ukupholisa, izindawo zokukhosela ngamabhomu… kanye nezitolo ziyafa.
Wenzani ngenxanxathela yezitolo engenalutho?
Yakha i-datacenter kuyo, kunjalo! Angiqiniseki ukuthi ngubani obenombono wokuqala wale phrojekthi, kepha kuyakhazimula - futhi kuyindida. Manje njengoba ingxenye enkulu yokuthengisa isithuthele ku-inthanethi, kuphola kanjani ukuthi inxanxathela yezitolo iguqulwe ibe yindawo yolwazi? Kuyindida yokugcina encwadini yami! Kungenzeka ukuthi i-Eastgate yayivala iminyango yabantu abahamba ngezinyawo eminyakeni embalwa eyedlule, kepha inethuba lokuvuselwa kwenye yezindawo ezinkulu kakhulu, ezithengisa kakhulu, 'ezitolo ezinkulu' ezweni!
Ngizozama ukusetha isikhathi sokuvakasha noDoug ngesonto elizayo noma kunjalo. Angisakwazi ukulinda ukubona lokho abakufezile!
Tags: imallgate mallizikhungo zedatha yokuphila
Usesho lweSayithi le-Google ku-SERP?
Icebo Elikahle Lokukhulisa Ibhulogi Yakho
UJun 29, 2008 ngo-6: 50 AM
I-karma yezitolo ukuphindukuzalwa kabusha njengesikhungo sedatha… inengqondo. Yilokhu esingakubiza nge- “e-budism”?
UJun 29, 2008 ngo-8: 39 AM
Bengiyithanda iNdebe Yebhontshisi futhi ngikhuluma nawe uDoug. Sidinga ukukwenza lokho kaningi. Futhi ungibala lapho uvakashela (enye) isikhungo sedatha esisha sikaDoug!
UJun 29, 2008 ngo-10: 50 AM
Kuyamangalisa lokho ngezitolo ezinkulu! Bengingazi ukuthi uDoug ungene entweni enjengale. Kuhle lokho!
Jun 29, 2008 ku-5: 14 PM
Siyabonga ngokuqashelwa, uDoug. Ngibe nesikhathi esimnandi ngixoxa nawe noPatric nabasebenzi beBean Cup izolo. Sizohambela i-Eastgate ehlelelwe nina bafana.